साहित्य Archives - Page4of 83 - NepalDut NepalDut
डा. बाबुराम अधिकारीलाई अली मियाँ पुरस्कार
अली मियाँ लोकवाङ्मय सम्मान पुरस्कारबाट समालोचक, साहित्यकार डा बाबुराम अधिकारी सम्मानित भएका छन् । अली मियाँ लोकवाङ्मय प्रतिष्ठानले आइतबार आयोजना गरेको समारोहमा साहित्यकार सरुभक्त, प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हनिफ मियाँ लगायतले डा. अधिकारीलाई सम्मान गरे । पुरस्कारको राशि ५० हजार र ताम्रपत्र छ । सहप्राध्यापक डा अधिकारी अहिले पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा नेपाली शिक्षा विभाग प्रमुख छन् । उनका आधा दर्जनभन्दा बढी समालोचनात्मक कृति, आधा दर्जन पाठ्यपुस्तक र विभिन्न साहित्यिक रचना प्रकाशित छन् ।… पुरा पढौ
गजल सन्ध्यामा वसन्तको नेतृत्वमा नयाँ समिति
गजल सन्ध्या पोखराको १७ औं साधारणसभा तथा १२ औं अधिवेशनले वसन्त विनोदको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । उपाध्यक्षमा सुरज उपाध्याय, सचिव त्रुपक, कोषाध्यक्ष महेश्वर बस्ताकोटी र सहसचिव मैयाँ सुवेदी चुनिएका छन् । सदस्यमा माधवप्रसाद खतिवडा, सृजना ढकाल, विकास गौतम र विष्णुप्रसाद सुवेदी छन् । ‘गजलको उत्थान, हाम्रो अभियान’ भन्ने उद्घोषका साथ स्थापित संस्थाले हरेक महिनाको दोस्रो शनिबार नियमित गजलवाचन आयोजना गर्दै आएको छ । संस्थाले गजलबारे अन्तक्र्रिया, छलफलसहित… पुरा पढौ
अली मियाँ सम्मान पुरस्कार अधिकारीलाई
यस वर्षको अली मियाँ लोकवाङ्मय सम्मान पुरस्कारबाट समालोचक, साहित्यकार डा बाबुराम अधिकारीलाई सम्मान गरिने भएको छ । अली मियाँ लोकवाङ्मय प्रतिष्ठानले स्थापना र सञ्चालन गर्दै आएको यो पुरस्कारको राशि ५० हजार र ताम्रपत्र छ । डा अधिकारी अहिले पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा नेपाली शिक्षा विभाग प्रमुख छन् । उनका आधा दर्जनभन्दा बढी समालोचनात्मक कृति, आधा दर्जन पाठ्यपुस्तक र विभिन्न साहित्यिक रचना प्रकाशित छन् । उनी यसअघि जमर्को पुरस्कार तथा सम्मान (२०५६), नेपाल… पुरा पढौ
कविताः पहाडमा विकास
सबै मिली पहाडमा बिकाश गरेछनधुले सडक जन्मे छन् पैसा पचे छन्डोजरे पहिरोले पाखा ढाकेछनखनी खोस्री खाने बारी पुरी दिए छन् धुवाँ उडाउदै गाउँ बेशी भिर र टाकुरामागाडीहरु गुड्न थाले कुना कन्दरामातस्बिरमा हेर्थ्योउ मोटर, घरमै पुगी हालेगाउँलाइ शहर बजार संग जोड्न थाले फर्कनुस युवाहरु अब सरासरउद्यमी भै आफ्नो गाउँलाई पारौं हराबराब्यबसायिक कृषि गरि फाइदा अब उठाउपरिवारको अनुहारमा मुश्कान यसले छरौं बिग्रिएको वाताबरणको सुधार गर्दै जाउँप्रांगारिक बिधि अपनाई देसको शान बढाउँआशा गरौ… पुरा पढौ
शेरमानको जन्म जयन्तीमा ३ कृति लोकार्पण
असमका प्रख्यात आख्यानकार, नाट्यकार शेरमान थापाको ८३ औं जन्मदिन समको शोणितपुर जिल्लाको बडभोगियामा मनाइएको छ । सो अवसरमा तीन पुस्तक लोकार्पित भए। असमका समकालका चर्चित कवि, कथाकार, समालोचक तथा अनुवादक रुद्र बरालको कागजको नाउ उनकै सहोदर तथा बडझार माध्यमिक विद्यालयका अवकाश प्राप्त प्रधान शिक्षक पुन्यप्रसाद उपाध्यायले सार्वजनिक गरे । विमोचनको क्रममा उनले तेस्रो आँखोको लोकप्रियताको प्रसङ्ग झिक्तै त्योभन्दा अझ खारिएको अनुभव लिएर बरालले लेखेका कविता अझ चर्चामा आउने छ्न् आशा… पुरा पढौ
जेनन र सर्मिलाले स्थापना गरे पुरस्कार
कवि जेनन नेपाल र शर्मिला दुलालले आफ्ना हजुरबुबा, हजुरमुमाको नाममा पुरस्कार घोषणा गरेका छन् । साहित्य सङ्गम मकवानपुरले २०७९ बाट प्रदान गर्ने गरी उनीहरुले डम्बर पूर्णमाया कविता पुरस्कार स्थापना गरेका हुन । पुरस्कारको राशि २२ हजार २ सय २२ रूपैयाँ छ । संगम अध्यक्ष अनिता न्यौपानेले पुरस्कार संस्थापक जेनन र सर्मिलालाई धन्यवाद दिएकी छन् । साहित्यकार जेननले पुरस्कारले राम्रा कविहरुलाई प्रोत्साहन र सम्मान गर्ने उल्लेख गरे । पुरा पढौ
साहित्य शृंखलामा लक्ष्मीको नेतृत्वमा नयाँ समिति
साहित्य शृंखला पोखराको अधिवेशनले लक्ष्मी थापाको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चुनेको छ । संस्थाको शनिबार भएको तेस्रो अधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा ताराप्रसाद तिमिल्सिना, सचिव काजी गाउँले, सहसचिव सन्तोष न्यौपाने र कोषाध्यक्ष लक्ष्मण गौतम चुनिए । सदस्यमा विकास लुङ्गेली, लीला पण्डित, गीता तिवारी, विष्णु सुवेदी, भक्त रसाइली र वीरेन्द्र सूर्यवंशी छन् । नवनिर्वाचित अध्यक्ष थापाले प्रगतिशील लेखनमाथि लागेको कोरा नाराको आरोपलाई चिर्दै कला र विचारको संयोजनको लागि अथक प्रयास गर्ने प्रतिवद्धता गरिन् । उनले… पुरा पढौ
डा. खगराज अनुभूति संग्रह बजारमा
शिखा बुक्सले प्रकाशन गरेको लेखक डा. खगराज बरालको अनुभूति संग्रह ‘मालामा नउनिएका फूलहरू’ फागुन पहिलो सातादेखि बजारमा आएको छ । साहित्यमा श्रमिक बरालका नामबाट कलम चलाउने बरालका साहित्यमा ७ पुस्तक प्रकाशित छन् । बरालले शिक्षासम्बन्धी नीति, सिद्धान्त र कार्यान्वयनमा झण्डै १ दर्जन कृति नेपाली पाठकसामु पस्किसकेका छन् । वास्तविक अनुभूतिलाई पुस्तकका रूपमा ढाल्न खप्पिस बरालका यसअघि ‘सिकाउने शैली’ (२०७५) तथा ‘सिकाइ र सहयोग’ (२०७६) लोकप्रिय रहे । गत वर्ष बराल… पुरा पढौ
एमसिसीको विरोधमा सुरजको गीत
अमेरिकी परियोजना एमसिसीबारे देशका शक्ति विभक्त भएका बेला जनपक्षीय लेखक, कलाकार भने यसको लेख, रचना र गीतबाट विरोध गरिरहेका छन् । यसै क्रममा पोखराका गीतकार सुरज उपाध्यायको गीत ‘नो एमसिसी’ को म्युजिक भिडियो शुक्रबार सार्वजनिक भएको छ । गीतले भन्छः खाए खा, नखाए घिच अमेरिका भन्छभन साथी भीख मागेर देश कहिले बन्छ ?से नो एमसिसी, से नो एमसिसी गीतमा संगीत र एरेन्ज तारानाथ आचार्यको छ भने स्वरमा आचार्यलाई पर्वती जिसी,… पुरा पढौ
कथा : चरित्र
‘अङ्कल हिजो नभेटिएर बाटोभरि कस्तो खल्लो खल्लो लाग्यो । अफिस नै जानु भएन कि कसो ? कि म ढिलो, हजुरअघि जानु भएर हो ?,’ सुशान्तिले तीव्र चासो राख्दै भनेकी थिई । अनि दृष्टिहरू नबिसाइकन किञ्चित ओठ गालातिर लस्काएर मुस्काएकी थिई । ‘म हिजो अलि छिटो जानु परेकाले भेट नभएको होला,’ मैले स्पष्टिकरण दिए । हामी बाटोका साथी बनेका थियौं । सुशान्ति र म । दैनिक भेटघाट हाम्रो आदत बनेको… पुरा पढौ